Tamba Pamhepo Poker Sites - Pamhepo Casino Bhonasi Makodhi
(843 mavhoti, avhareji: 4.00 kubva 5)
Loading ... Iri peji rakatsaurirwa kukuunza iwe mazano nemabhonasi yezvose zvakanyanya mari chaiyo paIndaneti. Zvose zviitiko zvakarongwa papeji ino zvinobvumira vatambi kuti vatambe nemari chaiyo, asi nepamusoro pezvikwata zvepaIndaneti zvakawanda. Isu takabatana nemari yose yemari yakasikwa, uye tinouya nezvatinotenda kuti ndiyo mitatu yakanakisisa yekutsvaga mari chaiyo poker online. Zvose zvitatu zvemasayiti aya ane mari yekunyora mari uye mari chaiye, asi mikana iwe unofarira kutamba mari chaiye kana uri kuverenga peji ino.
List kuti Top 10 Poker Sites
ABOUT Playing REAL MARI Poker
Saka waedza Facebook kana Zynga poker uye waita zvakanaka. Kana iwe wakambotamba zvishoma online pamitambo-yemari matafura pane chaiyo poker saiti senge 888poker kana PokerStars kana Yakazara Tilt Poker.
Ndeupi musiyano nechinhu chaicho?
Ndeupi musiyano uripo pakati payo neicho chaicho-chemari poker matafura? Vakanaka chaizvo vatambi chaivo-mari? Zvakawanda sei zviyero zvepakati? Marii shoma yandinogona kuitambira?
Vazhinji vatambi vanotarisa kuti vaite kusvetukira kune chaiyo mari pamhepo poker vane mibvunzo yakawanda. Uye kudhiraivha mukati kunogona kuita kunge chinhu chinotyisa. Asi hazvifanirwe kudaro.
Uye nepo kutamba-mari poker iri zvechokwadi mutambo wakasiyana pane chaiyo-mari poker, kana iwe waita zvakanaka mumitambo yemahara iwe ungangodaro uine hunyanzvi hwese hwaunoda kuti uite zvakanaka muchinhu chaicho.
Muchokwadi, iwe ungatowana kubudirira kwakawanda sekusafungidzira kwekutamba-mari poker (sezvo isiri chaiyo vatambi vemari vasina basa nekurasikirwa nemachipisi avo uye nekudaro vanoita kusanzwisisika kufamba) kunova kunofungidzira zvakanyanya - uye zvakanyanya kushandiswa - mu chaiyo-mari mitambo.
Real Money Online Poker yakasiyana pane Play Mari
Zvachose nomumwe anotanga akabuda kutamba-mari pokeria vasati kutamira kune-zvechokwadi mari pokeria anobvumirana mitambo kutamba mari zviri zvikuru chimwe chinhu: kudzidza zvinokosha.
Kana paine mari chaiyo pamutsetse, mitambo inotsvedza.
Maawa mashoma pamatafura ekutamba akakosha pakuita kuti unzwe nezve mutambo - marongero ekutamba, maitiro ekubheja, kugadzirisa kune kumhanya kwechiito, mashandiro anoita mashandiro uye nezvimwe.
Kana iwe uri kutarisira kudzidza inoshanda chaiyo-mari poker zano mune iwo mutambo, zvakadaro, urikurova kumusoro muti usiri iwo. Kune vazhinji vatambi-mari vatambi vanosekesa uye vasina hanya - uye nei?
Havana chinhu chokukunda uye hapana chavanofanira kurasikirwa, saka vanoita pachena vachiita zvepenzi uye mapenzi. Kamwe kana vachinge vabuda mumaputi, vanongokumbira zvimwe. Uye zvino enda uye uvaparadze nenzira imwecheteyo.
Izvi hazviitike mune chaiyo-mari poker - kunyangwe pa1 ¢ / 2 ¢ microstake (kunyangwe iwe uchiri kuwana mashoma akasununguka emakani manhamba akaderedzwa zvakanyanya).
Kune vatambi vakawanda vanotyisa, chokwadi. Asi ivo havasi gehena vakatsunga kurasikirwa nemachipisi avo nekukurumidza sezvavanogona. Muchokwadi, kunyangwe mitambo yacho ingave diki - uye nenjodzi yemari - vamwe vatambi vanobatirira pamachipisi avo kwehupenyu hunodiwa.
Izvi zvinoreva kuti ivo chaizvo 100% vanofungidzira pamatafura. Uye mari chaiyo muhomwe yako. Chero nzira, hapana kungoenzanisa.
Tangai yakaderera-muganhu mari chaiyo mitambo uye kushanda nzira yenyu
Real-mari poker mitambo ndipo pane iyo "chaiyo" chiito chiri. Zano racho rinonakidza, vatambi vanowirirana uye mitambo yacho inotonyanya kurohwa - kana iwe uchiziva zvishoma nezve zvauri kuita hongu.
Haufanire kutambisa mari yakawanda uchidzidza tambo futi. Mazhinji makamuri epoker - anosanganisira ese masosi akanyorwa pamusoro - anopa mazana ematanho epasi-muganho kubva pa1 ¢ / 2 ¢ mitambo yemari kusvika pamadhora 1 petafura imwe chete.
Achitendeukira masendi kupinda nickels
Zvakawanda mhuka kuita namasendi.
The nokutanga zvinenge pakarepo vamwe chimiro kana mumwe uye unogona kuwana pachako uri chigaro chaiwoiwo maminitsi mushure iwe kusika nhoroondo yako.
Kunyangwe zvirinani mazuva ano nzvimbo zhinji dze poker dzakatamira kune yekuvaraidza-mutambi anotyairwa modhi uko iwe unodzivirirwa kubva kune vane ruzivo vatambi pamasaiti. Iwe uchatamba pamatafura ekutanga-akarongedzwa, uve nenguva yakawanda yekugadzirisa kumutambo uye haufanirwe kunetseka nezve kupinda pamusoro pemusoro wako nekukurumidza.
Unogona kuisa mari Debit kana Credit makadhi (Visa, Mastercard etc). Zvichiitika nyore uye iwe uchava kutamba pa tafura pamberi unoziva. Mune ramangwana tinogona kunyange tine itsva dhipoziti zvavangaita akawedzera, kufanana somuenzaniso Bitcoin. Sezvo nhasi iri haisi mwero dhipoziti chisarudzo.
Ko mari chaiyo paIndaneti Poker mitambo pamutemo?
Mumwe wemibvunzo yakajairika vatambi vatsva vemari-chaiyo ndeyekuti "ndinoziva sei kuti mari yangu yakachengeteka" uye "ndinoziva sei kuti zviri pamutemo kwandinogara."
Ivai nenzvimbo pani.
Mhinduro yeiyo, chokwadika, zvinoenderana nekwaunogara. Munzvimbo zhinji dzakatenderedza pasirese, uye kunyanya mhiri kweEurope, mari chaiyo poker pamhepo inodzorwa, kuisirwa marezinesi uye nevadziviriri-inodzivirirwa nemasangano akawanda kusanganisira hurumende dzenyika nevatungamiriri vezvitupa zvematunhu.
kana iwe urikutamba nemari chaiyo pane chero eakareba-akasimba poker saiti senge SpartanSlots, Planet7, NYC, nezvimwewo hauna chaunonetsekana nacho.
Real-mari pamhepo poker parizvino iri mamiriro ezvinhu flux muUnited States, zvisinei. Zvemutemo zviri kufambira mberi nyika-ne-nyika neNevada, Delaware neNew Jersey pari zvino nyika chete painobvumidzwa uye kubhadhara mutero senge chero rimwe bhizinesi.
Nyika dzakaita seCalifornia, Pennsylvania neNew York dzave kumashure uye zvinoita kunge gore re2016 rinenge riri mwaka wekubudirira wemitemo yepoker online. Uye zvakare, kune nyika zhinji dzepasirese, chaiyo-mari online poker yakasimbiswa zvizere, hurumende uye indasitiri inoshanda pachivande neese akakodzera mirau uye dziviriro yaungatarisira.
Online Poker anogara kuwanika
Tarisa kuburikidza neyedu chaiyo-mari poker saiti wongororo pamusoro uye iwe uchaona munguva pfupi sarudzo dzako hadzina muganho kana zvasvika padanho remitambo ye poker yaunofarira.
Uye zvakanakisisa ndechokuti unogona kukurumidza kudzidza zvose unofanira kuziva kuva kuhwina mutambo nokuti, pane vakawanda, imwe nembiri shoma pazuva. Kana iwe kuwana turika nezvazvo, kuhwina ichava ose atapire.
Tarisa sarudzo yedu yekambani yezvakakosha iwe unotanga kutanga purogiramu shoma paIndaneti uye uongorore maitiro edu emhando dzebhonasi chete uye zvinowanzopiwa.
Nhanho yakanaka - uye nakidzwa nekukwira!
0.1 List kuti Top 10 Poker Sites
2.1 ABOUT Playing REAL MARI Poker
2.2 Real Money Online Poker yakasiyana pane Play Mari
2.3 Tangai yakaderera-muganhu mari chaiyo mitambo uye kushanda nzira yenyu
2.4 Ko mari chaiyo paIndaneti Poker mitambo pamutemo?
2.5 Online Poker anogara kuwanika